Baratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBaratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu
Damee Boruu: Muddee 07/2020
Oromo students in Weldiya University, in the regional state of Amhara, were refused to return to their campus dormitories in November 2019, because some of their friends got killed by Amhara students.
Aarsaan baratonni Oromoo Bilisummaa Uummata Oromoof gochaa turanii fi jiran bifa kamiin iyyuu madalame kan himamuu danda’u miti. Kan ajjeefaman, kan qaamni isaanii itti hirate, kan waxxalaman, kan mana hidhaa diina keessatti gidirfamanii lubbuun darbe, kan utuu baqatuu irribaata bineesaa fi qurxxumii tahee fi kan achi buuteen isaanii hin argamnee lakkoofnee fixxuu hin dandeenyu. Walii gala seenaa qabsoo Saba isaanii goobsuu fi hojii dhaloota har’aa aangoomsee mootummaa walabaa akka dhaabbatan gochuuf gumaata ol anaa baasanii fi baasaa jiru.
Bara keessaa jiru kana dhalli Oromoo barataa tahe qotataa tasa akka bineesaa ajjeefamuun, hidhamuu fi admsamuun hojii PP keessaa isa guyyaa guyyaan raawwatamu tahee jira. Qabeenya Uummata Oromoo saamuu irratti PPn Oromoo fi Amharaa afaan qawween wal dura dhaabbachuuf guyyaa lakkawwaa jirra. Olaannoon PPn Oromoo hundi yoo waan oddeessamuu dhugaa tahe qabeenya biyyaa milliyoona baayyeen lakkawwamuu saammatanii jiru. Qabeenya isaanii kana tiksuuf jecha nama isaan dura dhaabbatu hundaa lafa irraa haxxaa’anii balleessuuf yaalaa jiru. Karaa qajeelaa irra akka hin jirre isaanuu waan dagatan hin fakkaatu. Garuu waan sammuun isaanii oftummaa fi of jaalalan tortoree jiruuf dhugaa dubbachuu fi fudhachuun isaan rakkisaa jira.
Ija keenya dura itti aangoon isaanii akka fixxensa barii dugugamee utuu badaa jiru akka waan sibila ufatanii jiranii waan xuqamuu hin dandeenye of fakkeessuuf yaadau. Isa uummata hatanii tulatan nyaachuu miti isa borsaa isaanii keessa jiru nyaachuufuu yaroon itti gabaabatee jira. Warri garaa isaaniif qofaaf jiraatan kun biyyi badaa jiru takkaa isaan hin gaddisiisu. Keessattu Ummatni Oromoo hatattamaan Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessa Oromiyaa yoo hin jiraannee badii aboomamuu hin dandenye keessa akka seenuuf deemu beekamuu qaba.
Itti gaafatamnii PP Oromoo Oromiyaa saamuu malee dantaa Uummata Oromoo fi Oromiyaa tiksuu miti. Bara darbe yaroo baratoonni Oromoo Unversitii Naannoo Amhaaraa keessatti ajjeefamanii reeffi torbaan torbaniin warraaf ergamuu PPn Oromoo maaliif jettee gaafachuuf illee hin yaadne yookas onnee hin qabane. Ijoollee baqatee dhokatee badaa turte illee warri bara sana mootummaa of harkaa qabna jedhu PPn Oromiyaa hara’a jirra jettu bartoota gidiraa argaa turanii sagalee tahuu sodaachuun waan nama qaanessu. Baratoonni Oromoo saba Oromoo tahniif qofa karaa irraa qabamanii tumamaa mana hidhaatti darbamaa yaroo turan TPLF baratoonni Tigray akka Universitii Naannoo Amhaaraa hin deemne dhorkuun kan yaadatamu. PPn Oromoo garaa isheef malee gaaf tokko kan Uummatni Oromoo itti boonu hojjetee hin beektu. Seenaa Uuummata Oromoo keesatti PPn ulee salphinaa akka taatetti baduu deemti.
Mootummaa jiraachuun isaa rawwate, Mootummaa Konoonel Abiyi kan gaggeessaa jiru adda duran ilmaan nafxanyaa fi diqaalota ilmaan isaanii akka tahe argaa jirra. Warri kun sammuun isaanii funyaan isaanii irraa achi fageessee ilaaluu hin danda’u. Hawwiin isaanii inni duraa Oromoo cabsanii bituu dha. Inni lammaffaa Impaayeera Itoophiyaa deebisanii ijaarachuu dha. Lachuu harka isaanii keessaa bahee jira. Garuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Naannoo Amhaaraa turan diiguu irratti milkaa’anii jiru. Haa tahu malee, naanno kana lamaan jeequun kan isaan balleessuu kan isaan gargaaru hin qabu.
Mootumman Oromiyaa erga jigee erga humna waraanan bulu jalqabee waggaa lamaa ol tahee jira. Har’a Oromiyaa keessa humna waraanaa irraa kan hafe caasaan mootummaa hin jiru. Uummatni Oromoo miila waraanaa fi dabballee PP jalatti kufee seeraa fi heera tokko malee dhidhiitamaa jira. Roorroo kana of irraa darbuuf Uummatni Oromoo biyyaa fi biyyaa ala jiru harka wal qabatee irree tokkoon qabsoo isaa itti muddaa jira. Guyyaa PPn biyyo nyaatus fagoo hin jiru.
PPn Amhaaraa Naannoo Amhaaraa bulchuuf hojjechuu erga dhiisanii turanii jiru. Qabsoon hadhooftuu isaan gochaa jiran Uummata Oromoo cabsuu fi Finfinnee kan isaanii godhanii dhunfachuu dha. Naannoon Amhaaraa bakka sirna dhablummaan (anarchism) itti guddatee dagaagee jiru dha. Abbaa hin qabu. Warri naannoo sana bulchuu qaban Oromiyaa qabachuuf gaggabaa jiru. Naannoo Amhaaraa keessatti nama saamuun, okaamsanii horiin furachuu fi wal ajjeessuun waan guyyaa guyyaan tahaa jiru. Biyyaa kan hunkuraa jiru “goboz halaqaa” fi “faannoo” warra jedhaman kan seeraan hin bulle. Kun utuu kanaan jiruu namichi isaanii kan aangoo lammaffaa PP qabu Damaqaa Mokonoon horii biyyaan uummata haala kana keessa jiru hidhachiisuuf labsuun waan ajaa’ibaati. Damaqaan nama siyaasaa waan taheef uummata biratti fudhatama argachuuf godhee haa jennu. Mataan Ammantii Ortodoksii Abuna Maatiyoos waan isaa irraa eegamuu qabuu nagaa fi tasgabii kadhanaa gochuu utuu qabu innis dabalee Uummata Amhaaraa hidhaadha jechuun waan baayyee nama yaadessu dha. Namoonni nageenya biyya lafaaf hawwan hunduu warra waraana leelisuu fi warra waraana labsee uummata wal ficcisiisu deemu kana sagalee guddaan balaalefachuu, abaaruu fi dura dhaabbachuu qabu.
Amma Oromiyaan bilisa hin taane amma Oromoo taanee dhalachuun dhitamuu fi ajjeefamuuf hixaa keenya tahee jira. Yaroo olla isaanii tahuun iyyuu nama yaadeessu jiru kana keessa barumsaaf jennee gara Universtii Naannoo Biyya Amhaaraa deemuun harkaan funyuu mormatti of hidhuu taha. Baratan/baratuun tokko of murteefatee/murteefattee yoo deeme/ deemte murti abbaa waan taheef waan nama galchu hin jiru. Garuu haalli keessa jirruu fi kan itti deemaa jirru bara darbe irra hammataa waan tahee gara sana deemuuf qalbiin murteefachuu wayya. Yoo lubbuun jiraate barumsii darbee hin qabu. Utuu Oromoon Mootummaa qabaatee akkuma Naannoon Tigray baratota isaa gara Naannoo Amhaaraa erguuirra akka Universitt Naannoo Oromiyaa keessa jiranitti baratan godha. Kanfuu ammaaf baratonni Oromoo Universtii Naannoo Oromiyaa jiran keessatti barachuu yoo hin dandeenye yaroo egachuun dirqama taha natti fakkata.